သံဃာတော်များနှင့် လူပုဂ်္ဂိုလ်၏ ဒဏ်ရာအချို့မှာ အသားများပါ ပဲ့ကျကာ အတွင်းသို့ လှိုက်စား လာ ကြောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Ethnic Hatred Tears ApartaRegion of Myanmar
Student protest at Yangon for Letpadaung copper mine forcible crackdown »
“နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီတွေ လိုချင်ပါတယ်။ အခု ဒီလို ဒဏ်ရာရခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတာရှိပါ တယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ဘယ်နှယောက် လာမလဲတော့ မသိသေးဘူး။ လေးနိုင်ငံကတော့ လာမယ်၊ မန္တလေးဆေးရုံမှာပဲ ကုသရမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့၊ သံဃာတွေ ကများတယ်၊ နေရာပြောင်းဖို့ကမလွယ်ဘူး။ ကုသမယ့်နေရာကို စီစဉ် နေတုန်းပဲ”ဟု စိမ်းရောင်စို Activity (မန္တလေး)မှ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးနေသစ်က ပြောကြားသည်။
“မန္တလေးဆေးရုံက ဒဏ်ရာတွေ ပျောက်ဖို့အတွက် ဆေးတွေ ထိုးပေး တယ်လို့တော့ သိရတယ်၊ အသေးစိတ် ဘာတွေ ကုပေးတယ်လို့တော့ မသိဘူး”ဟု ဦးနေသစ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ဒဏ်ရာတွေက မသက်သာဘူးဗျ။ အခု မဖြူဖြူဝင်းဆိုရင် ဒဏ်ရာက အရမ်းနာလာတော့ ဆေးထိုးပေးဖို့ ပြော တယ်၊ အခု မန္တလေးဆေးရုံကို ပို့လိုက်ရပြီ”ဟု မုံရွာမြို့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးသက်ဆွေအေးက ပြော သည်။
This entry was posted on December 5, 2012 at 2:11 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.